Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Kenya » Kenya ayaa soo afjartay bandowgii dheeraa ee fiidkii ilaa waaberigii COVID-19
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Wararka Kenya • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Kenya ayaa soo afjartay bandowgii dheeraa ee fiidkii ilaa waaberigii COVID-19.
"Weli kama aan bixin kaynta sidaas darteed waa inaan sii wadnaa ilaalinta tallaabooyinka xakameynta… si aan u sii wadno guulaha aan sameyneyno oo aan dammaanad qaadno dib-u-furidda buuxda ee dhaqaalaheenna," ayuu yiri Kenyatta.
Bandowga coronavirus-ka ee waaberiga ilaa waaberiga Kenya, oo dhaqan galaya ilaa Maarso 2020, ayaa si rasmi ah u dhammaaday.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku dhawaaqay in si degdeg ah loo qaaday bandowga dalka ee COVID-19.
Kenya, oo ay ku nool yihiin 54 milyan, ayaa soo sheegtay 252,199 xaaladood oo ah COVID-19 iyo 5,233 dhimasho, sida lagu sheegay tirooyinkii ugu dambeeyay ee dowladda.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku dhawaaqay in dalkiisu yahay bandoowga fiidkii ilaa waaberigii dalka oo dhan kaas oo jiray ilaa March 2020 si loo yareeyo fiditaanka fayraska COVID-19, waa la qaaday.
Madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay go'aanka dowladda ee ah in la qaado bandow maanta waxa aan farxad iyo mashxarad ku soo dhawaynaynaa munaasibad lagu xusayo maalinta Mashujaca oo ah maalin fasax ah oo lagu maamuusayo dadkii ka qayb qaatay halgankii gobanimadoonka dalka.
Sida laga soo xigtay Madaxweyne Kenyatta, heerarka caabuqa COVID-19 ayaa hoos u dhacay, iyadoo in ka yar 5 boqolkiiba baaritaannada maalin kasta la xaqiijiyo.
Kenya, oo ay ku nool yihiin 54 milyan, ayaa soo sheegay 252,199 xaaladood oo ah COVID-19 iyo 5,233 dhimasho laakiin heerka tallaalku wali wuu hooseeyaa, iyada oo kaliya 4.6 boqolkiiba dadka qaangaarka ah si buuxda loo tallaalay, sida lagu sheegay xogtii ugu dambeysay ee rasmiga ahayd.
Madaxweyne Kenyatta ayaa sheegay in jameecada taga kaniisadaha iyo machadyada kale ee diimaha ay hadda kordhin karaan saddex-meelood labo meel, marka loo eego saddex meelood meel markii hore, in kasta oo qof walba uu wali u hoggaansamo qawaaniinta kale, sida xirashada waji-xidhka.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale faray mas’uuliyiinta dowladda in ay xaqiijiyaan buuxinta iyo dhameystirka warshadda tallaalka COVID-19 ay billaabatay Kenya bisha Abriil ee sanadka soo socda.
Oktoobar 21, 2021 at 01: 29